Maitiro Ekunyora Iyo Brand Chirongwa Kune Yako Dropshipping Chitoro? - Sarudza yako Kudonhedza Mentors kweDropshipping Course
Academy branding urongwa
Maitiro Ekunyora Iyo Brand Chirongwa Kune Yako Kudonhedza Chitoro?
Zvinonyanya kuzivikanwa kuti muchiso yakakosha ku kudonhedza bhizinesi. Kuvaka mhando nemazvo, kunze kweiyo rudzi rwemhando or zita rechiratidzo dhizaini, zvinodikanwa uye zvakakosha kunyora chirongwa chechiratidzo chekuita iyo marita mazano zvirinani. Mukutaura, chirongwa chakanyora chakanyorwa chakanangana nehuropi-kuvimba kwesangano, zviwanikwa uye matekiniki munzira yavanofanira kuenda kuitira kuti mucherechedzo uzadzise zvinangwa zvawo. Inobatanidza mabasa akadai sekushambadzira, kutengesa, chigadzirwa kuvandudza uye kutsanangura zvinofanirwa kuitwa neboka rega rega kuti mucherechedzo ubudirire. Uyezve, inoisa zvibodzwa zvinoda kutsigirwa nemashandiro nemari. Nekudaro munhu wese anotyaira achipesana nechiratidzo chimwe chete, nyaya dzakakosha, marongero, uye maitiro. Chinyorwa chino chichaunzira maitiro ekunyora chirongwa chechiratidzo cheako kudonhedza chitoro.
Pindura Mibvunzo mishanu
Chirongwa chechiratidzo chinoshanda chinopindura patiri, nei tiri pano, patinogona kunge tiri, masvikiro atinoita, uye zvatinofanira kuita. Nekupindura iyi mishanu mibvunzo ine hungwaru, iwe uchaona kuti iwe unayo yako pachako ongororo, akakosha mibvunzo, chiratidzo, zvinangwa, zano, kuita, uye kuyera. Iwe unogona kunyora 2-3 mabara poindi yemumwe nemumwe wemibvunzo uye uchave neyakaomarara dhizaini pepa kuti uve nechokwadi chekuzara kwechirongwa.
Funga nezveElements Of The Brandi PLan
Muchokwadi, iyo mibvunzo mishanu iri pamusoro inogona kuratidza izvo zvinhu zvechiratidzo chirongwa. Iwe unogona kunyora chirongwa chechiratidzo chinoenderana nezvinhu. Mufananidzo uri pazasi unoratidza kuenderana hukama.
1. Chiono / Chinangwa / Zvinangwa
Kune chirevo chakataurwa naJogi Berra, "kana iwe usingazive kwauri kuenda, ungasasvika ikoko". Chiono chinopindura "isu tingave tiri kupi" neyakaenzana chishuwo (kutambanudza) uye chokwadi (kubudirira). Iwe unogona zvakare kuzvinzwisisa seyakareba chinangwa kana zvibodzwa zvinotsanangudza kubudirira kwako. Chiratidzo chakanaka chinofanira kukufadza zvakanyanya pane kukutyisidzira zvishoma. Sezvineiwo, zvese zviri zviviri zvine hungwaru uye huwandu, izvo zvinoyemurika zvichienzaniswa zvichiteerana. Anenge makore mashanu kusvika pagumi kana kudarika zvinopfuura izvo zvakaratidzwa zvinogona kugara. Uye chiratidzo chinofanira kuve nyore kuti munhu wese anzwisise uye vatenderedze. Usasanganise maonero pamwe nebasa. Icho chinangwa chakanyanya kutaurwa uye nezve kuti iwe uchasvika sei kwaunoda kuve iwe.
2. Mamiriro Ekuongorora
Kuongorora mamiriro ezvinhu ndiko hwaro hweshambadziro chirongwa icho chinopindura "patiri" mumusika. Inosanganisira kuongorora kwakadzama kwemukati nekunze zvinhu zvinokanganisa bhizinesi, senge chikamu, mutengi, vakwikwidzi, chiteshi, brand uye mamiriro azvino emusika senge kukosha kwakaita chigadzirwa chako kunounza mucherechedzo. Iwe unogona kupfupisa chiri kutyaira bhizinesi, chii chiri kuridzosera kumashure wozoisa njodzi uye mikana isina kubikwa. Edza kushandisa SWOT analytical nzira uye tarisa pamusoro soro 3-4 mapoinzi anofukidza simba, kushaya simba, mikana, uye kutyisidzira. Nekugadzira mhedziso yesangano, iwe unenge uine nzwisiso iri nani yezvinhu zvinokanganisa ramangwana rayo.
3. Nyaya Dzakakosha
Nyaya dzakakosha pindura "sei uripano" uye unogona kuwanikwa nekupindura mibvunzo mina.
HatNdei iyo CORE KUSIMBISA iyo brand yako inogona kukunda pairi?
OwAkasungwa zvakadii mutengi wako kuchako?
HatNdeipi nzvimbo yako yazvino Makwikwi?
HatNdeipi iri bhizinesi razvino SITUATION chiratidzo chako chakatarisana nacho?
Mushure mekuita yakadzika-dhiza ongororo pamhinduro kumibvunzo mina, uchave nekutanga kwakanaka pamakwikwi ako, muchiso, vatengi uye mamiriro ezvinhu.
Strategies pindura "sei kusvika ikoko". Iwe unofanirwa kuita sarudzo padanho rekutarisana kana uchitarisana nezvishoma zviwanikwa maererano nemadhora, nguva, vanhu uye kudyidzana. Mutengi anogona kusangana nenguva dzakasiyana dzechigadzirwa chako, kubva kune asingazivikanwe, asina hanya, kutenga, senge, kuva akavimbika. Uye munguva dzakasiyana, iwe unofanirwa kuita zvakasiyana nzira.
Kana vatengi vasingazivikanwe nezvechako chiratidzo, iwe unofanirwa kubata pfungwa yavo nekutanga zviitiko, kushambadzira, nezvimwewo Saka vatengi vanozoona mucherechedzo mumhomho. Padanho reIndifferent, tarisa pakusimbisa chinzvimbo chako muchimiro chevatengi uye gadzira sarudzo yavo. Ipapo vatengi vanogona kuve nechido chekutenga zvigadzirwa zve brand yako. Parizvino, iwe unofanirwa kutora rakarongeka basa kupatsanura chako chiratidzo kubva kurongedza kuvaka kuvimba kunotevera nekutenga kwega kwega kunofadza. Mushure mekutenga, vatengi vangangoda brand yako. Usazeze kutyaira kwakadzika kubatana navo. Pakupedzisira, vatengi vanogona kunge vakavimbika kuchako chako uye iwe unofanirwa kuedza kuti vatengi vako vakavimbika vataure vakamirira zita racho. Unganidza vateveri vechiratidzo sevatsigiri.
5. Kuuraya& Kuyera
Ita mhinduro "Chii chatinofanira kuita". Inoenderana kumusoro kwekushambadzira chiitiko kune iyo brand zano. Hapana mubvunzo kuti kuurayiwa kunoda kugadzira chisungo nevatengi vanobatana nemweya wechiratidzo, kumisikidza mukurumbira wechiratidzo chako zvichienderana nekumira kwakasiyana, kukurudzira vatengi kuchinja maitiro avo kufunga, kunzwa kana kuita, nezvimwe. achawedzera kusimba. Unogona kutanga ne Consumer Kutenga Sisitimu izvo zvinogona kuenderana nekako kushambadzira kuuraya kune uko mutengi wako anomira neako brand. Tarisa pane ako ekushambadzira zviitiko nekuenzanisa yega yega maitiro kukanganisa kune bhizinesi uye kuoma nhanho yekushandisa. Ipapo iwe unozoziva icho chiri chekutanga kuita.
Tags kudonhedza chirongwa cherudzi, mavakirwo echiratidzo, maitiro ekudonhedza pasi, kutanga sei kudonhedza bhizinesi, kutanga sei kudonhedza, shopu kudonhedza
← Wepamusoro 14 Akanyanya Kudonhedza Ecommerce Mapuratifomu → Nzira dzekutyaira Traffic kune Kudonhedza kana Kudhinda paDhiand Stores